Xukuumadda Somaliland Oo Tababaro Ciyaartooy Ugu Diraysa Debeda Toban Dhalinyaro Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Xukuumadda Somaliland Oo Tababaro Ciyaartooy Ugu Diraysa Debeda Toban Dhalinyaro Ah
Hargeysa(ANN)Xukuumada Somaliland ayaa sheegtay inay wado qorshe dhalinyaro ciyaartooy ah loogu dirayo tababaro iyo koorsooyin dalka debediisa ah. Sidaana waxa maanta xafiiska ka sheegay wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland Axmed Xaashi Madar
oo ka hadlay munaasibad arintaa loo sameeyay oo ka dhacday xarunta wasaaradda.
Mr. Axmed Xaashi, waxa uu sheegay inay hirgelinta hawshan iska kaashadeen Wasaaradda Dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo qurba jooga Somaliland, kuwaas oo soo dhameeyay inay 10 dhalinyaro ah u diraaan Dalka Ingiriiska, iyagoo sida uu sheegay halkaa ku soo qaadan doona kooras tababar ah oo loogu layliyayo inay noqdaan tababereyaal kooxeed.
Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada, Ciyaaraha iyo Dhaqanka Somaliland Axmed Xaashi Madar, oo ka hadlay xafladaa ayaa ka waramay hawlaha wasaaradda, isagoo yidhi, “Wakhtigan aynu ku jirno waa wakhti iska bilow ah, waxyaabihii aanu ugu tallo galay inaanu Wasaarad ahaan qabano waxba noogamay hirgelin, waxase ay u socotaa talaabo talaabo wax badanna waanu qaban doonaa haddii alle yidhaahdo oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada iyo ciyaarahaba.”
Wasiirku isagoo ka hadlaya kooxdaa dhalinayarada ah wuxuu yidhi, “Waxa jirtay qolo la yidhaahdo Somaliland Training oo aanu xidhiidh la sameynay oo qurbo joog ah ayaa waxay inoo soo dhameeyeen 10 dhalinyaro ah oo muddo sadex bilood ah la soo bari doono tababarenimada kooxaha ciyaaraha, haddii tobankan dhalinyarada ahi ay tababarka sidii la rabay uga soo baxaan waxa haddana la dirayaa toban kale. Waxaanu tobankan dhalinyarada ah ka soo kala xulay gobolada dalka oo dhan Caasimada Hargeysa sadex xubnood, Togdheer 2 xubnood, Awdal 2 xubnood, iyo sadexda gobol ee kale oo min hal xubnood ah.”
Waxa kale oo ka oo xafladaasi ka hadlay oo ka waramay marxaladii hawshaasi soo martay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Mustafe Maxamuud Qodox iyo wakiilka ururka qurbo jooga ah ee soo dhameeyay hawshaa, Ismaaciil Maxamed Faarax, ururkaa oo iyagu qaadaya 10-ka dhalinayada ah ee tababarayaasha loo soo tababarayo.
Dhalinyaradaa oo loo qaybiyay gobolada dalka waxay magacyadoodu yihiin sidan;-